Booliska Galmudug oo xiray Guddoomiye degaan - Awdinle Online
Booliska Galmudug oo xiray Guddoomiye degaan
Ciidamada Booliska dowlad Goboleedka Galmudug ee ka howlgalla Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug ayaa Maanta waxaa ay xireen guddoomiyaha degaanka Ceeldheere Cabdulaahi Cabdiraxmaan Raage (Xaduur).
Ciidamada oo ka baxay Magaalada Dhuusamareeb ayaa waxaa ay kasoo xireen degaanka uu guddoomiyaha ka yahay ee Ceeldheere oo kamid ah degaannada hoostaga Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug.
Warar kala duwan ayaa kasoo baxaya sababaha loo xiray Guddoomiyaha, waxaana Wararka la helay ays sheegayaan in loo heysto in uu u gacan qaadey oo uu weerarey Taliyaha Ilaalada Koontaroolada Dhamme Cabdi Yare.
Khilaafka labada mas’uul ayaa waxaa la sheegay in uu salka haayo kadib markii xilka laga qaadey Maxamed Axmed maxamuud oo ahaa Taliyihii hore ee Booliiska Ceeldheere, iyadoo Booskaasi loo magacaabey Faarax Geele xiireey oo xilka kala wareegay.
Maamulka Magaalada Dhuusamareeb ee Caasimadda Galmudug iyo laamaha Amniga degmadaas weli kama hadlin khilaafka ka dhex-jira Guddoomiyaha degaanka Ceeldheere ee Maanta la xiray iyo Taliyaha Ilaalada Koontaroolada Dhamme Cabdi Yare.
Previous articleAyax baabi’iyay Beero ku yaal Gobolka Mudug & qeylo dhaan laga muujiyay
Next articleAskari dil geystay oo xukun lagu riday